Sat, Dec 14, 2019 at 7:15pm
सन्तान अरुको अगाडि अग्लो देखियोस् भन्ने चाहाना सबैको अभिभावकमा हुन्छ । तर चाहेर पनि कति अभिभावकले आफ्ना सन्तानको हाइट अग्लो बनाउन सकिरहेका हुँदैनन् ।
कम हाइटका कारण बच्चाको व्यवहार पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।
उचाइ बढाउने उपाय
बच्चालाई बिहान व्यायाम गराउन अति नै आवश्यक छ । बच्चा बिहान उठ्न गाह्रो मान्नु स्वभाविक नै हो, तर आफ्नो बच्चाको राम्रो स्वस्थको लागि अभिभावकको पनि केहि दायित्व हुन्छ । बच्चालाई डोरि खेल्न लगाउने, उर्फने र दौडने जस्ता व्यायामहरु गराउन सकिन्छ । बच्चाको राम्रो शारीरिक विकासका लागि साइक्लिङ पनि आवश्यक छ ।
२. बच्चाको तौल र हाइटबारे जानकारी लिइराख्नुस् । समय–समयमा चिकित्सकलाई देखाउनुस् । यदि बच्चाको विकासमा कुनै समस्या छ भने सुरुमै थाहा पाउँदा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ ।
शुक्रवार साँझ काठमाडौंमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना, यस्तो हुने छ ३ दिनको मौसम
किन निचार्नुहुँदैन डण्डिफोर ? अब के गर्ने ?
वातावरणीय प्रदूषण रोक्न उपमहानगरपालिकाद्वारा प्लाष्टिक बिक्रीको तयारी
नङलाई कसरी सुन्दर र स्वस्थ बनाउने ?
​जाडोमा मुटुका बिरामीले अपनाउनु पर्ने यी उपायहरु